May | 2011 | QEERROO
Urgent Message: Arba Minch Uni
Posted on May 31, 2011 by Qeerroo
(Urgent Message, Arba Minch, 31 May 2011) According to Qeerroo report from Arba MINCHI 455 students were poisoned and 75 are critically hospitalized at the Arba Minch university.
Accordingly the food prepared for students were poisoned by unknown groups and there is now a big disturbance in the compound and the network services is blocked by the government in order to hide the news from the outside.
And because of the blocked network, we couldn’t send the details of the incident that happened upon the students here and in general we are now deprived of our right with out any reasons.
Many students are under arrest and some of them are already jailed…because they are asking who made this.
We will in touch soon as we get fresh news and information!
Mootummaan Wayyaanee Nyaata Summaa’een Barattoota Yunivarsitii Arbaa Minci Fixaa jirti!
(Oduu Qeerroo, Arbaa Minci, Caamsaa 31, 2011) Oduun amma Yunvarsitii Arbaa Minci irraa nu dhaqqabe akka hubachiisutti nyaata summaa’een barattooti 455 miidhamanii jiru.
Barattooti meeqa akka dhukkubsatan beekuuf yaaliin godhame sababa toorri walqunnamtii hin jirreef milkaa’uu baatus, odeessi addaan ciccitee dhufaa jiru akka hubachiisutti barattooti hedduun nayaata summaa’e erga nyaatanii booda of wallaalanii jiru.
Odeessi amma nu dhaqqabe akka hubachiisutti, gochaan diinummaa barattoota keenya irratti raawwatamaa jiru hedduu hammaachaa jira.
Akka kanaan shirri kana dura mooraa Yunvarsitii Adaama akeessatti raawwatame ammas kunoo, mooraa yuuniversitii Arbaa Minchi keessatti irra deebi’amuun nyaata summii qabu barattoota nyaachisanii jiru.
Haala kana irratti barataan tokko yeroo dubbatu, “Barattoota summii kanan dhukkubsatan baayyinni isaanii naannoo 455 ol jedhama jira. Kanaaf barattootni keenya guyyaa sadiif hanga ammaatti nyaata waliin wal hin argine. Amma illee barattooti keenya iyyachaa jiru,” jedhee jira.
Haalli kun yeroo ta’utti immoo akka gabaasaan qeerroo mirkaneessetti, barattooti hedduu waan isaan irra gahe illee himachuuf dadhabanii jiru.
Barattuun tokkos akka ibsitetti, “Amma barattoota hedduu keessaa kanan biratti argamu,barataan maqaa isaa nageenya isaatiif akka hin himamne barabaaduu dha. Inni yeroo na dubbisetti dubbachuu iyyuu dadhabee jira. kan nama gaddisiisu mucaa ani haasofsiselle natti haasa’uu dadhabe jennan dhiise; bayee miidhamanii jiru,”.
Gama kaaniin immoo mooraa san keessatti warra dhimmi kun akka qulqullaa’uuf gaafatan kanneen basaasan ramadamanii jiru. Odeessi amma karaa fulaa Facebook Qeerroo gahe immoo akkana jedha.
“Yeroo ammaa mooraan Yunivarsitii Arbaa Minci hedduu jeeqamaa jira. Wayyaaneen summii nu nyaachiftee, yeroo maliif akkas ta’a jennee gaafannu immoo karaa barattoota Poolisii mooraa jettee ramadatte,kan wayyanen filate keewwaatteen nu basaasaa jirti. barattoota oromoo dhimma kanaf dubbatan akka qabaman, gochuun barattoti akak wal hin amanne gochaa jirti.”
Barattootis haala kana beekanii akka wal gargaaran kanneen dhaaman kun itti dabaluunis, “amma hedduu yaaddessaa fakkaata. Ammoo kun warra ummata miidhaniif malee warra haqni jalaa dabsammeef humaa miti; kan dhugaa dhabe dhugaa argachuun hin oolu. Barattotis kana beekanii hiriyyootta isaanii dabarsabnii kennuu irraa akka dhaabbbatan gaafanna!” jedhnii jiru.
Amma gama kaaniin Wayyaaneen ummata Kibbaa waliin akka barattooti wal dhabdu illee shira xaxaa waan jirtuuf barattooti haala kana beekanii of eeggannoo akka godhan dhaamsi darbee jira. “Wayyaanen uummataa kibbaa barattootatti kaasuuf shireessaa jirti. Mootummaan kun karaa maraan barattoota keenya miidhaa jirti;amma filannoon qabnu lubbuu keenyaan baqachuu dha. Barattooti hedduus baayee of sodatanii jiru.”
Mootummaan Wayyaanee Nyaata Summaa’een Barattoota Fixaa jirti!
(Oduu Qeerroo, Arbaa Minci, Caamsaa 31, 2011) Oduun amma Yunvarsitii Arbaa Minci irraa nu dhaqqabe akka hubachiisutti nyaata summaa’een barattooti hedduu miidhamanii jiru.
Oduu kana bal’ina isaa akka arganneen isn beeksifna.
“The cruelty and lies of the TPLF government can’t halt the struggle of the people!” Qeerroo
Posted on May 30, 2011 by Qeerroo
Stop playing a political game on the Oromo people!
(A press release from Qeerroo/ Finfinnee, 29th May 2011) The political bankruptcy and lack legitimacy created due a repeated failure to convince the public at large with old cards have forced the TPLF regime to bit the Abay Dam construction drum in a bid to avert the public anger and the momentum of popular uprising from the Oromo and other peoples in Ethiopia.
The TPLF government has never raised the issue of Abay River at any time in the last 20 year of its dictatorship. Abay was always there, but the timely question is how come they saw Abay only now? Without solving the critical problems of the nation, the construction of Abay alone can’t avoid the existing and pushing problems with in the Country.
Today, the Oromo and other Ethiopian people can’t live in their own country; they are unable to plough, trade, produce and study in peace and freedom. The natural resources of the Oromo people, its land and minerals are on sale; productive areas of Oromo lands are being distributed to foreign land grabbers and to the regimes inners circles.
Left with nothing to eat, the Oromo is being forced to migrate from its land. Productive youngsters and innovative minds of are being dragged to prisons and the rest are forced to exiles. While Oromia is on sale to foreigners and to the regimes’ elites, the development and Abay dam construction propaganda is adding an insult to injury for the Oromo people.
Today when TPLF celebrate its 20th year of its dictatorship, it is clear for the Ethiopian people that the regimes’ propaganda of Abay dam construction as the only title and solution of Ethiopia’s problem is a political game. While it assembles peoples from all directions of the city with bus trucks to what it calls supports rally at Mesqel square to preach Abay dam construction and recording them for media consumption, the regime was also trying hard to put under control different University campus students resistance to the system of repression by sending the armed force and huge spy networks.
Press release from Qeerroo, 29 May 2011
Posted on May 29, 2011 by Qeerroo
Sirni Mallas Zeenaawii waggaa 20ffaa aangoo siyaasaa itti qabate kabajachuuf kan yoomiiyyuu caalaa barana yoo xixxiixu dhagahame. Waggoota amma duraa keessatti Tigraayitti yoo tahe malee Finfinnee fi magaalaalee biyyattii biro keessatti ayyaana Gimboot 20n kabajadha jedhee yoo xixxiixu hin dhagahamne. Maaliif yoo jedhame Tigraayiin alatti ummata irraa deeggarsa akka hin qabne of beeka waan taheef sagalee dhokfatee masaraa isaa keessatti kabajachuu filataa yoona gahe. Kan baranaa maal tu adda taasise ree kan jedhu gaaffii dha. Eeyyee, kan baranaa wanni adda taasise beekamaa dha. Bara baranaa tu baroota amma dura dabran mara irraa adda tahe. Bubbee warraaqsa farra abbaa irrummaa Tuuniisiyaa irraa jalqabe tu gara Itoophiyaattis afarsaa jira. Keessumattuu karaa maloota walqunnamtii hawaasaa walaba tahaniin guyyaa Wayyaaneen Gimboot 20 jedhee kabajatutti fincila farra sirnichaa geggeessuuf waamicha taasifamaa ture tu Wayyaanee yaaddesse. Jaarmayaaleen dargaggoota Oromoo akka Qeerroo fi humnootni mormituu biyyattii biroon sochii diddaa siyaasaa sirnicha irratti jalqaban tu Wayyaanee irriba dhorkate.
Kanaafuu sirnichi muddama kana keessatti sagalee gadi qabatee akka amma duraatti guyyaa kana irra dabruu mannaa hanga humna isaa of dhaadee ummatoota biyyattii fi hawaasa addunyaa gowwoomsuu barbaade. Gowwoomsaanis tahu dirqiidhaan namoota miseensa dhaaba isaa godhate guyyaa kanatti hiriira waamee ammanan gahaa na argaa, warri na mormitan abdii kutadhaa jechuu barbaade. Akka eenyuyyuu beekutti barattoonni yuniversiitiilee fi kooleejota biyyattii keessaa baratan hundi dirqamatti unkaa miseensummaa wayyaanee guutaa bahan. Kan jibba sirnichaa qaban hundi barnoota isaanii xumuranii hojii dhabilee tahuu sodaaf jecha osoo hin jaalanne waraaqaa miseensummaa sirnichaa fudhachuuf dirqaman. Kanneen hojiilee sadarkaa xixiqqaa irratti bobba’anis jaarmaya afaan siyaasaa wayyaaneetiin Maaykroo fi Xixiqqaa jedhaman jalatti gurmaawanii miseensummaa dhaaba wayyaanee fudhachuun dirqama isaanii tahuun beekamaa dha. Yoo didan waraqaa heyyama hojii hin argatan. Abbootiin qabeenyaa baadiyaa fi magaalaa keessaa tattaaffii mataa isaaniitiin gara miliyeenerummaatti guddachaa jiranis osoo hin jaalanne dirqamatti miseensa IHADEG akka tahan dirqisiifaman. Yoo miseensummaa kana didan hojiidhaan ala taasifamu, qabeenyaan isaaniis sababoota adda addaatiin jalaa saamama. Miseensummaa ABO fa’an sobaan yakkamanii hidhamuu fi ajjeefamuunis ni jiraata. Kanaafuu namuu nagaadhaan bulee maatii isaa jiraachifachuuf jecha waraqaa miseensummaa sirnichaa akka fudhatuuf dhiibame.
Wayyaanee IHADEG bifa kanaan qaamota misooma biyyaa kana dirqiitti harkatti galfatee ittiin nagadaa jira. Kanneen hiyyeeyyii turan kana tu sirna kiyya jalatti gara miliyoonerummaatti guddatan jechuun itti baaca. Akka waan ofii nagadeefii yookiis ofii isaaf qoteefii qabeenyaa jara kanaa ol guddisetti ‘Firii Gimboot 20’ ittiin jedhee siyaasaa isaa dulloome halluu dibuuf wacabbara. Jara akka meeshaa siyaasaatti itti dhimma bahu kanaanis ‘Gootota Misoomaa’ ykn Yelimaat Jegnooch ittiin jechuun qorqorroo tumee akka meedaalaatti mormatti fannisuudhaan gowwoomsaan. Yaaliin Wayyaanee kun hundi biyya misoomsuuf miti. Ummatoota beela bara baraatiin adabamaa yoona gahan beelaa baasuufis miti. Akka afaaniin lallabu iyyummaa seenaa taasisiifis hin imaammanne. Kaayyoon isaa guddaan akka hattuutti waliin dhawee bara bittaa sirna isaa dheereffachuu dha. Miseensota miliyoona 5in qaba jedhee of tuuluu, kanaanis qorqalbii lammiilee biyyattii bilisummaa fi dimokraasii haqaa dheebotan miidhuufi.
Wayyaanee TPLF, golgaa maqaa biyyoolessaa EPRDF jedhuun of haa waamu malee, mootummaa biyyoolessaa kan ummatoota biyyattii mara bakka bu’us miti. Sirni kun murna dhiphoo saba bicuu kaabaa keessaa dhalate, kan Itoophiyaa bulchuuf hamilee homaatuu itti hin qabnee dha. Guyyaan itti sirni kun masaraa Shaggar qabate ummatoota Itoophiyaa biratti guyyaa gaddaa ti. Guyyaan Gimboot 20 Wayyaanee kun guyyaa Meskerem 2 Dargii irraa addummaa hin qabu. Dargiin bakka sirna Hayle Sillaasee gaafa bu’u ummatootaaf waadaa hin seenin hin qabu. Waadaa san laaluudhaan ummatoonni biyyattii sirni abbaa lafaa nurraa kufe, kana booda walqixxummaan keenya ifatti baha jedhanii guyyaa Meskere 2 Dargiif marartee horatanii turan. Waggoota lama sadi booda garuu Dargiin waadaa ummataaf seenaa ture faallessee abbaa irree hiriyaa hin qabne tahe as bahe. Ilmaan biyyaa qaroo tahan barbaadee rashanuu dalagaa taasifate. Jagnoota sirna fuudaalaa irratti murannoon qabsaawaa turan kan akka Janaraal Taaddasaa Birruu fi Koloneel Hayiluu Raggaasaa fa’a badii tokkoon maleetti rashane. Kan biraa hafnaan kanneen maalummaa siyaasaa afaan isa barsiisaniif illee garaa hin laafne. Warra barumsaan qaraman sodaata waan taheef aangoo narkaa fudhachuu barbaadu jechuun ilmaan Oromoo qaalii akka Hayilee Fidaa fa’a galaafate.
Wayyaaneenis Gimboota 20 bara 1991 gaafa barcuma Dargii dhaalu waadaa ummatootaaf hin seenin hin qabu ture. Kana booda barri bara demokraasii fi bilisummaa ti, ummatoonni Itoophiyaa kana booda guyyaatti al sadi maaddiitti dhihaatu, qawwee maarashaatti, taankii tiraakteeratti jijjiirra jedhee dhaadate. Kana dubbatee waggaa tokko illee osoo hin guutin humna akka masaanuutti laalu ABO mootummaa cehumsaa keessaa dhiibee kophaa isaa aangoo dhuunfate. ABO sirna karaa nagaa keessaa baasee hin dhiifne. Lola irratti bane. Wayyaaneen akkuma Dargiitti qaroowwan biyyaa diina godhatee kan itti duuluu jalqabe akkuma aangoo qabateeni. Aangoo irraa na kaasuu malu jedhee sodaatee gara jabinaan lafa irraa haxaawe, warra lubbuun hafes biyyaa baqachiise. Mirga demokraasii afaaniin waadaa seene dalagaadhaan itti ejjetee mulquudhaan keessumattuu deeggartoota ABO karaa nagaadhaan yaada isaanii ibsatan aduu saafaatiin rashane. Lammiileen Oromoo kumoota heddutti lakkaawaman hanga aduu har’aa kanatti manneen hidhaa sirnichaa keessatti tortorfamaa jiran. Kanneen ukkaamsamanii gara dabarfamanis lakkoofsa hin qaban. Kanneen murteen du’aa fi hidhaa umrii guutuu itti murteeffames manni haa lakkaawu. Kun hundi ololaaf kan dubbatamu osoo hin taane dhugaa hawaasni addunyaa fi dhaabileen mirga namoomaa idil addunyaa sirriitti quba qabanii dha.
Maskaram 2 Dargii fi Gimboot 20 Wayyaanee wanni wal fakkeessu kan biraas ni jira. Dargiin warraaqsa wareegama barattootaan bilchaatee dhoowe saammatee tu aangootti of baase. Firii warraaqsa ummataa butee ti ofiif liqimse. Qabsoo barattoonni fi beektonni biyyaa geggeessan itti seenee afaan qawweetiin harkatti galfate. Wayyaaneenis qabsoo sabaa fi sablammoonni biyyattii sirna Dargii irraa bilisa of baasuuf geggeessaa turan maqaa IHADG jedhuun butatee kortoo aangoo masaraa Araat Kiilootti ittiin bahan godhate. Keessumattuu Oromiyaa keessatti qabsoo diddaa sirna Nafxenyaa waggoota kurnootaaf hogganummaa ABOtiin deemaa ture haalee firii qabsoo Oromoo butatee liqimse. Milishaa waraana Dargii keessaa booji’aman irraa dhaaba bixxillee Afaan Oromoo dubbattu Tigiraay keessatti tolfatee ‘isaan kana tu qabsaawota Oromoo ti, isaan kana tu Oromoo bakka bu’ee na waliin Dargii kuffise’ jechuun tuffii ummata Oromoof qabu dirree baase. Qabsoo ummata Oromoo kan gaafa jaarama Waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi Fincila Oromoo Baalee irraa qabee hanga kufaatii Dargiitti deemaa ture qaanii tokko malee gatii dhowwachuu yaale. Wareegama qabsoon Oromoo bara nugusichaa irraa qabee guutuu bara Dargiif kafalaa ture dunuunfatee haaluudhaan, dhaaba bixxillee milishaa Dargii booji’amte irraa dantaa mataa isaaf bixxillateen jijjiire. Wayyaaneen kana gochuudhaan ABO xiqqeessuu haa akeekkatu malee ummata Oromoo bal’aaf tuffii qabu mirkaneesse.
Eyyee! Sirna kana fakkaatu tu Gimbot 20 jechuudhaan ummata Oromoo fi ummatoota madaa wal fakkaataa qaban biro irratti lafa dhiitaa jira. Sirna hattuu siyaasaa fi hattuu dinagdee tahe kana tu demokraasii fi mishooman isinii fide jechuun nyaara haaddatee ummatoota gowwoomsaa jira. Sirna bilisummaa ummata Tigraay qofaaf jecha manaa bahe tu ummatoota Itoophiyaa mara cunqursaa jalaa baasuuf jedheen wareegama waggoota 17 kafale jechuun biyya kijibaa jira. Sirna qaroo ilmaan biyyaa akka bosonuutti adamsee qalaa jiru, hidhee tortorsaa jiru, ukkaamsee gara dabarsaa jiru tu heera mootummaa walqixxummaa keessan mirkaneessun tume jechuun ummatootatti baacaa jira. Sina bittaa waggoota digdamaa guutuu keessatti maqaa Itoophiyaa beelaan addunyaa irratti beekamu jijjiiruu hin danda’in tu ‘bara keenyatti kunoo qotataan miliyoonera tahe’ jechuun ummatatti qoosaa jira.
Kanaafuu Gimboot 20 baanamus guyyaa itti dabballoonni TPLF fi garaaf bultoonni sabaa hagoon cittoo isaanii ummatatti urgufatanii qabeenya ummataatiin garaacha baasuu jalqaban malee guyyaa bilisummaa ummatootaa miti. Guyyichi guyyaa itti sirni cunqursaa fi ukkaamsaa tooftaa jijjiirratee daranuu hidda isaa ummatoota irratti diriirfate malee guyyaa walqixxummaa fi demokraasiin itti mirkanaawee miti. Gimboot 20nWayyaanee guyyaa itti Dargiin qiciicaan Dargii moluudhaan bakka bu’e dha. Lamaanuu dargii wal faraqan waan tahaniif ummatoonni biyyattii har’ayyuu cunqursaa bara baraa jalaa hin baane. Dargiilee mataa ummatootaa irratti wal jijjiiran kana yeroo maayyiif ofirraa figgimsanii sirna haqni, walqixxummaan, bilisummaa fi demokraasiin dhugaan itti diriire fiduuf qabsoon jabaatee itti fufa!
Ummata Oromoo Irratti Qumaara Siyaasaa Xaphachuun Rawwachuu Qaba.
(Ibsa Qeerroo, Finfinnee, Caamsaa,29,2011)Yeroo ammaa degersa siyaasaa dhabee kisaaraa siyaasaa fi kufaatii keessa kan jiru mootummaan Wayyaanee,diddaa ummata Oromoo fi Ethiopia kaanii of irraa hambsisuu jecha maloota ammaan dura dhahachaa ture harkatti dhumnaan har’a falaasama ittisa laga Abbayyaan yaada jedhuun ummata Oromoos tahe saboota biyyattii keessa jiranitti dibbee tumaa jira.
Lagdi Abbayyaa baroota dheeraaf bakkuma san ture,erga Wayyaaneen aangoo qabattee baroota digdamaan lakkaayaman kana keessa Abbayya barbaachisummaan isaa takkaa hin kaane;falaasama barbaachisummaan abbayyaa qondaalota TPLF itti har’a eessaa mul’ate kan jedhu gaaffii yeroo ti. Rakkoo ummattootaa kan bu’uraa osoo hin furiin Ittifamuun Abbayyaa bakka dhibdee saboota Ethiopia keessa jiranii ittisuu fi cufuu hin dandayu.
Ummati Oromoos tahe sabootiin biro yeroo har’aa kana biyya qaban irra jiraachuu hin dandeenye;qotanii,daldalanii,omishanii fi baratanii soda malee jiraachuu hin dandeenye. Qabeenyi ummata Oromoo, lafti fi albuudni, guutuutti gurguramaa jira;naannooleen lafa Oromoo waa omishuu dandayan martinuu abbootii qabeenyaa biyya alagaa irraa seenanii fi ergamtoota Wayyaaneetti gurguramee dhumaa jira.
Oromoon waan nyaatuu fi bakka jiraatu dhabee qe’ee isaa irraa heddumminaan godaanaa jira,humni dargaggoo kanneen biyya ijaaruu dandayanii fi qaroon ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuramaa jiru,kaan biyyaa arihamaa jira.Biyyi Oromiyaan kan dureessoota alagaa taatee guutuutti gurguramaa osoo jirtuuf mishoomaa fi Abbayya ittisuu kan jedhuun ammoo gurra ilmaan cunqurfamaa Oromootti dibbee dhahuun daranuu tuffii ummata Oromoof qaban muldhisa.
Guutummaa ibsa Qeerroo: Ibsa Qeerroo, Caamsaa 29,2011
Kaayyoon Qeerroo Oromiyaa Roorroofi Hiraarsaa Ummata Oromoo Irraa Kaasuu Dha!
(Oduu Qeerroo, Finfinnee, 29 Caamsaa 2011) Qeerroon Bilisummaa torbee kana keessa akka ibsetti fincillii fi diddaan sirna abbaa irree Mallas Zeenaawwii irratti eegalame jabaatee itti fufa; mootummaan Mallas Zeenaawwiis diiddaa dargaggootaa kana karaa mara ukkaamsuuf tattaaffii godhu itti fufee jira.
Haala diddaa Qeerroo kana ilaalchisee Televizyiniin Oromiyaa magaalaa Torontoo gaaffii fi deebii Qeerroon Oromiyaa waliin godhee karaa Youtube isaa tamsaase irraa akka hubatamutti, kaayyoon Qeerroo Oromiyaa roorroo fi cunqursaa ummata Oromoo irra gahaa jiru gamtaan falmachuu dha.
Gaaffiifi deeebii karaa sarara bilbilaa godhame kanaan akka ibsametti Qeerroon akka hundeeffamtu sababa kan ta’e, miidhaa fi saamicha ummta Oromoo irra gahaa jiruu dha.
Qeerroon Oromiyaa itti dabalees , “akkuma kaleessa abbootiin keenya seenaa boonsaa hojjatanii nu dhaloota haaraan gahanitti, nuti dhalooti haaraa, Qeerroon, seenaa haaraa hojjannee Oromiyaa haaraa mirgi dhala namaa keessatti kabajamu mul’isuuf kutannee falmachaa jirra; haala kanas hawaasti keenya beekee gama danda’e hundaan diddaa isaa sirna abbaa irree Mallas Zeenaawwii irratti akka finniisu dhaammanna!” jedhee jira.
Qeerroo: Abdii Oromiyaa
Posted on May 28, 2011 by Qeerroo
Qeerroo jechuun dardara,
Dargaggeessa,gayeessa isa gaayelaan dura,
Mee waa’ee qeerroon eera,
Na hambisaa ija’rraa.
Qeerroo durii kan gadaa,
Kan warra saba guddaa,
Warra gootummaan adda.
Isaantu diina adamsa,
Isaantu biyya tiksa,
Kun egaa dhugaadhuma, seenaatu mirkaneessa.
Kuusaa gadaa abbaa duula,
Qeerroo ogeessa lola,
Wal ta’eetu diina haleela,
Qeerroo sanyii qeerransaa,
Osoo inni lubbuun jiru,eenyitu tuqa biyya’saa?
Qeerroon aadaatti bulu,kan gadaan masakamu,
Sabboontich Oromoo,gonkumaa hingabroomu.
Sirna gadaatu laaffate,
Yaanni addadda baate,
Wanti halagaas nu seente,
Yartuun nu gabroomfatte,
Yaa qeerroo koo hubatte?
Namatu of jijjiire,
Orma jala hiriire,
Lukkeetu nu gurgure,
Yartuutu nu darare,
Yaa qeerroo yaa addadure,
Maal wayya maal goonu’ree?
Yaa qeerroo yaa utubaa,
Lammii kee isa wayyaba,
Yartuut’ yaabee irraa sirba,
Sabbicuutu hidhee reeba,
Malli maali yaa gurba?
Hanga yoom nu dararti?
Jajjabaadhu yaa qeerroo amma yeroon geesseetti.
Yaa qeerroo yaa qeerransoo,
Yaa qeerroo qaroo nama,
Yaa butaa akka harangama,
Yaa dutaa akka jarlama,
Yaa goota irree jirma,
Sumatu diina tuma,
Sit’ xumura gabrummaa,
Akka ‘saatu akkanuma,
Kun hinoolu tasumaa.
Qeerroo tokkoomee ka’e,wal ta’ee wal ijaare,
Tooftaafi tarsiimoo baase kan qabsaa’ee hiriire,
Lammii gabrummaan miite,cunqursaa’rraa baraare,
Kaayyoon deebi’aa jirti kunoo ijaan agarre,
Kan keenyas yeroon geesse,haataanu abbaa dabaree.
Qaama hawaasaa isa qaroo,
Qeerroo qoricha roorroo,
Qabsoo finiinsaa jira,haatumsin yaa dhiiroo.
Yaa qeerroo yaa abbaa seena,
Wal taanee waliin kaanee,haadhabamsiisnu diina.
Yaa qeerroo sammmuu qara,
Cunqursaa bara baraa,
Fincilatu nu fura,
Qabsootu nu baraara,
Qeerroo abbaa kallacha,
Abbaa mirgaa abbaa faacha,
Isatu nu hoofkalcha,
Harkuma harkaan gumaacha.
Yaa qeerroo kaayyoo gaarii,
Tooftaafi tarsiimoo hori,
Hawaasa kee ijaari,
Kanuma keeti barri,
Lammii isa yartuun miite,cunqursaa’rraa baraari,
Bittaafi dhiibbaan halagaa,haaraawwatu xumuri.
Cimsi diddaa gabrummaa,
Haafincillu yaa jama.
Mirga hiree murteeffannaa,
Qabsoo keenyaan gonfanna,
Yaa qeerroo yaa abbaa xiiqi,
Yeroon geessee warraaqi,
Golgaa gabrummaa saaqi,
Diina lafa’rraa dhiqi,
Boollatti gadi naqi,
Lammii cunqursaan mite,imimmaan irraa haqi,
Oromiyaa bilisoomsi,injifannoon burraaqi.
Yaa qeerroo Yaa abbaa duula,
Abbaa malaa abbaa fala,
Dammaqsi dhiiraafi dhala,
Kan baadiyyaafi magaala,
Baasi tooftaa fincila,
Diina nibuusa boolla,
Kun hinoolu battata.
Qeerroo goofaree tuuta,
Yaa goota sanyii goota,
Dimokiraasii dhugaa qabsoon bu’uuressita,
Yaa qeerroo yaa qeerrole,
Ammaa tola yoo tole,
Waltaanee waliin duulle,
Marti keenya fincille,
Diina haabuusnu qile.
Harka wal haaqabannu,
Lammii yartuun darartu, qaanii keessaa haabaasnu!
Caamsaa 4, 2011
Barattoota Yunivarsitii Awaasaa irra uggurri kaayame!
Posted on May 27, 2011 by Qeerroo
(Oduu Qeerroo, Awaasaa, 27 Caamsaa 2011) Barattooti Yunivarsitii Awaasaa keessa baratan lamaa ol ta’anii akka hin argamne uggurri kaayame; diddaan barattootaa ugguruufis basaasota haaraa “poolisiii barataa” jedhaman mooraa keessatti bobbaastee jirti.
Qeerroon akka gabaasetti, yeroo ammaa kana jechuun Caamsaa 15 irraa eegalee filannoo barataa fi ulaagaa tokko malee kaawonsiliin barataa karaa seeraa filamee fi poolisiin mooraa osoo jiru sababa hin beekamnee fi mooraa Yunvarsitii kaam keessatti illee ta’ee hin beeknen, “poolisii barataa” jechuun jaleewwan isaanii fi ijollee seelii uffataa adda uffachiisuun mooraa keessa bobbaasanii jiru.
Haaluma kana waliin,yeroo ammaa kana barataan Oromoo lama yookaan sadii ol ta’ee bakka tokko yoo ta’ee ijolleen sun eenyufaa akka ta’an maqaa isaanii warra tika wayyaaneetti akka gabaasan ajajamanii jiru.
Akka heera biyyattiittii mooraan mana barnoota dhimma amantii fi siyaasa irra walaba ta’u iyyuu yeroo ammaa kana wayyaaneen siyaasaa ija baaseen barattoota gidduutti walqoodinsa uumuutti jirti.
Kana biras darbuun, mootummaan wayyaane ayyaana Caamsaa 20 mooraa Yunvarsitii keessatti ayyaanessuuf jechaa laafaafi mukti osoo hin hafiin qalama dibuun ayyaaneffachuuf lafa dhiphisaa jira.
Qeerroon tokko yaada gabaasaa qeerroof kenneen, “waanti nama ajaa’ibu ijaarsa dhimma hidhaa abbayyaaf jechaa qulqullinni nyaataa hir’atee jira; kana irra darbees guyyaa 12f barataan ciree dhorkamee soomaan dabarsee jira,” jedhee jira.
Sababa hir’ina qulqullina nyaataan yeroo amma kana barataan dhibee adda addaatif saaxilama jira. Kilinikin mooricha bartaa humna ittin tajaajila wal geessisuu dhaaba wantaa jiruuf dabaree hedduu daree (class) keessatti dabarsuun mula’taa jira.
Qeerroon dhimma kana irratti yaada kenneen, barattooti haala haaraa wayyaaneen shiraa jirtu kana beekanii adeemsa isaanii akka wayyeeffatan dhaamuun, “kanneen garaaf jecha abbootii irree waliin bobba’anii gaaffii mirgaa barattootaan ka’aa jiru kolaasuuf yaalan waan saalfachiisaa akkanaa irraa adhaabbachuun gara diddaa barattootaatti dabalamuu qaban,” jedhee jira.